နာဟုံ – 2ငါးကို
မူလစာမျက်နှာ / သမ်မာကမျြး / ဓမ်မဟောငျးကမျြး / နာဟုံ
1:1 နိနေဝေမြို့နှင့်ဆိုင်သောဗျာဒိတ်တော်. နာဟုံ၏ရူပါရုံကိုအဆိုပါ Elkoshite ၏စာအုပ်.
1:2 ဘုရားသခငျသညျပြိုင်ဘက်ဖြစ်ပါသည်, နှင့်သခင် avenging ဖြစ်ပါတယ်. သခင်ဘုရား avenging ဖြစ်ပါတယ်, အမျက်တော်သည်သက်ဆိုင်တဲ့သူတစျဦး. ထာဝရဘုရားသည်မိမိရန်သူနှင့်အတူ avenging ဖြစ်ပါတယ်, မိမိရန်သူတို့ကိုအမျက်တော် ထွက်. ဖြစ်လာ.
1:3 သခင်ဘုရား၏တန်ခိုးတော်အားဖြင့်လူနာနှင့်အသည်ကြီး, စင်ကြယ်မဟုတ်သောသူတို့၏, သူကအပြစ်မဲ့စေသည်. သခင်ဘုရားသည်မိုဃ်းသက်မုန်တိုင်း၌တည်ရှိ၏, နှင့်သူ၏လမ်းတစ်ဘွေဖြစ်ပါသည်, မိုဃ်းတိမ်ခြေတော်ရင်း၌မြေမှုန့်များမှာ.
1:4 သူကပင်လယ်ကိုဆုံးမသူတစျဦးဖွစျသညျ, အဘယ်သူတက်ခန်းခြောက်, သူသဲကန္တာရအားလုံးကိုမြစ်ကိုဦးဆောင်. ဗာရှန်ပြည်အားနည်းခဲ့ပြီး, လည်းရမေလတောင်, နှင့်လေဗနုန်အပွင့် languished ထားပါတယ်.
1:5 တောင်ကြီးတို့သည်သူ့ရှေ့မှာတုနျလှုပျခဲ့ကြ, နှင့်တောင်ကုန်းလူဆိတ်ညံလျက်ဖြစ်လာကြပါပြီ, နှင့်ပထဝီမြေမျက်နှာတော်ကိုအမတိုင်မီလှုပ်ရှားလျက်ရှိသည်, ကမ္ဘာကြီးကိုနှင့်အထဲတွင်ကျိန်းဝပ်သောသူအပေါင်းတို့သည်နှစ်ဦးစလုံး.
1:6 အဘယ်သူသည်အမျက်တော်၏ရှေ့တော်၌မြဲမြံစွာရပ်နိုင်? အဘယ်သူသည်သူ၏ဒေါသအမျက်တော်ဆန့်ကျင်ဆက်လက်နိုင်ပါတယ်? အမျက်တော်သည်မီးကဲ့သို့ထွက်ကျိုးပဲ့ဖြစ်ပါတယ်, နှင့်ကျောက်တုံးများသည်ရှေ့တော်၌ဖျက်သိမ်းပြီ.
1:7 ထာဝရဘုရားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူဖြစ်ပါသည်, နှင့်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်း၏နေ့အတွက်ချမ်းသာပေးနိုင်သော, သူသည်ထိုသူ၌မျှော်လင့်ပါတယ်တဲ့သူတွေကိုသိတယ်.
1:8 ထိုအကျော်ဖြတ်သန်းသောရေလွှမ်းမိုးသောအတွက်, သူကမိမိနေရာမှအဆုံး consummation မှဆောင်တတ်၏. နှင့်မှောင်မိုက်သည်သူ၏ရန်သူတို့အလိုကျစားရကြလိမ့်မည်.
1:9 သင်တို့သည်သခင်ဘုရားတဘက်၌အဘယ်သို့တက်စဉ်းစားနေကြတယ်? သူကုပြည့်စုံလိမ့်မည်. နှစ်ဆဆငျးရဲဒုက်ခရှိတယ်မထရကြလိမ့်မည်.
1:10 ဆူးပင်၌အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက် entwine နည်းတူများအတွက်, ထိုနည်းတူ, သူတို့စားသောက်နှင့်အတူတကွသောက်သုံးနေကြစဉ်, သူတို့လုံးဝခြောက်သွေ့ကြောင်းအမှိုက်ကဲ့သို့စားသုံးပါလိမ့်မည်.
1:11 ထဲကသင်တို့အားထာဝရဘုရားတဘက်၌မကောင်းသောအတက်ထင်တဲ့သူတဦးတည်းထွက်သွားလိမ့်မည်, သူ့စိတ်ကတဆင့်သစ္စာဖောက်ဆွဲ.
1:12 အရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏: သူတို့စုံလင်သောရှိခဲ့ပါလျှင်, သူတို့ကိုအများအပြားဒါ, သေးသေးသသူတို့ pruned မည်ဖြစ်ကြောင်း, ထိုသို့သူတို့ကိုမှတဆင့်ကူးပါလိမ့်မယ်. ငါသည်သင်တို့ကိုညှဉ်းဆဲဘူး, ငါမပိုသင်တို့ကိုညှဉ်းဆဲရကြလိမ့်မည်.
1:13 ယခုမှာငါသည်သင်တို့၏နောက်ကျောကနေမိမိလှံတံကိုချိုးလိမ့်မယ်, ငါသည်လည်းသင်တို့၏ခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်ဖွင့်လှစ်ချိုးမည်.
1:14 ထိုအခါထာဝရအရှင်သငျသညျအပျေါမှာပညတ်တော်ကိုနေရာချပါလိမ့်မယ်; သင်၏နာမကိုမှ ပို. ဘာမျှမကြဲခြင်းအကြောင်းအရာပါလိမ့်မည်. သင်တို့၏ဘုရားသခင်၏အိမ်တော်မှသည်, ငါထုသောရုပ်တုနှင့်သွန်းသောရုပ်တုတို့ကိုဖကျြဆီး Order ပါလိမ့်မယ်. ငါသည်သင်တို့၏သင်္ချိုင်းသို့လုပ်မည်, သငျသညျဂုဏျမဟုတ်သောကြောင့်,.
1:15 အကယ်, တောင်တို့ကျော်, ဧဝံဂေလိနှင့်ငြိမ်သက်ခြင်း၏ကြေညာချက်များ၏ခြေရင်း. ယုဒအမျိုးကို, သင့်ရဲ့ပွဲတော်များကျင်းပနှင့်သင့်သစ္စာဂတိကိုစောင့်ရှောက်. အဓမ္မနောက်တဖန်သင်တို့ကိုဖြတ်သန်းဘယ်တော့မှလိမ့်မယ်များအတွက်; သူကလုံးဝပျောက်လွန်ပြီ.
2:1 သူကတက်, သင်တို့မျက်မှောက်၌အရပ်ရပ်ကွဲပြားစေမညျ့သူ, သူကိုပိတ်ဆို့ထားခြင်းကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားမည်ဖြစ်ကြောင်း. လမ်းကိုစဉ်းစား, သင့်ကျောကိုပြုပြင်လိုသော, ကိုအလွန်သီလအားဖြည့်.
2:2 သခင်ဘုရားသည်ယာကုပ်အမျိုး၏မာနဆပ်ပြီ, ရုံဣသရေလအမျိုး၏မာနနှင့်တူ. အဆိုပါလုယူဘို့ထိုသူတို့ကွဲပြားစေ, သူတို့ပှားကိုဖျက်ကြပြီ.
2:3 သူ၏ခိုင်ခံ့သောသူတို့၏အလွှားမီးဖြစ်၏, စစ်သူရဲတို့သည်နီသောအထည်၌ရှိကြ၏. ရထား၏ကျောက်ကပ်သည်မိမိပြင်ဆင်မှုရာကာလ၌မီးများမှာ, နှင့်ယာဉ်မောင်းမူးယစ်ဆေးခဲ့ကြ.
2:4 သူတို့ကသူတို့ရဲ့လမ်းခရီးတွင်ရှုပ်ထွေးဖြစ်လာကြပါပြီ. အဆိုပါလေး-မြင်းရထားတို့သည်လမ်း၌တိုက်မိပါပြီ. သူတို့ရဲ့အသွင်အပြင်မီးနှင့်တူ၏, လျှပ်စီးပတ်ပတ်လည်ပြည့်နဲ့တူ.
2:5 သူသည်သူ၏ခိုင်ခံ့သောသူတို့၏စိတ်ခေါ်ပါလိမ့်မယ်; သူတို့ခရီးတစ်လျှောက်ငါဖျက်ဆီးမည်. သူတို့ကလျင်မြန်စွာမြို့ရိုးတက်မည်, နှင့်အမိုးအကာကိုပြင်ဆင်ပါလိမ့်မည်.
2:6 အဆိုပါမြစ်တံခါးဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီ, နှင့်ဗိမာနျတျောမြေပေါ်မှာလှဲဆွဲထားပြီး.
2:7 ထိုအခါခြေလျင်စစ်သားသွားခြင်းကိုဦးဆောင်ခဲ့ပြီး, နှင့်သူမ၏ယောက်ျားမိန်းမနှင်ထုတ်ခဲ့သည်, ချိုးကဲ့သို့စိတ်မသာညည်းတွား, မိမိတို့စိတ်နှလုံးထဲမှာညညျးညူ.
2:8 ထိုအနိနေဝေမြို့, သူမ၏ရေငါးရေကန်ကဲ့သို့၎င်းဖြစ်ကြ၏. သို့သျောလညျးကိုအမှန်တကယ်, အဝေးသို့ပြေးကြပါပြီ: "ရပ်, ရပ်နေ!"ဒါပေမဲ့ပြန်လှည့်မည်သူတယောက်မျှမရှိ.
2:9 ငွေလုယူ, ရွှေလုယူ. ထိုအနှစ်လိုဖွယ်ပစ္စည်းကိရိယာများအပေါငျးတို့သစည်းစိမ်ဥစ္စာမရှိအဆုံးလည်းမရှိ.
2:10 သူမသည်အရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားလျက်ရှိသည်, နှင့်ဖြတ်, နှင့်တကွဲတပြား. ထိုအခါစိတ်နှလုံးကိုပျော်, နှင့်ဒူး buckle, နှင့်အားနည်းချက်တိုင်းစိတ်ထား၌တည်ရှိ၏. ထိုအခါသူတို့ကိုလူအပေါင်းတို့၏မျက်နှာများတဲ့အနက်ရောင်ရေနွေးအိုးကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏.
2:11 ခြင်္သေ့၏နေရာအရပ်သည်အဘယ်မှာရှိ, နှင့်ခြင်္သေ့ပျို၏နို့တိုက်ကျွေးရေးမြေပြင်, ခြင်္သေ့သည် သွား. အရာမှ, ခြင်္သေ့ပျိုများအတွက်လမ်းဖွင့်မှသကဲ့သို့, ဒါမကြောက်စေသူမရှိဖြစ်လိမ့်မယ်လို့?
2:12 ခြင်္သေ့သည်သူ၏ငယ်ရွယ်လုံလောက်သိမ်းဆည်းရမိ, နှင့်သူ၏ခြင်္သေ့များအတွက်အလုံအလောက်ဦးသေဆုံး, သူလုယူရာဥစ္စာနဲ့သူ့ရဲ့ကျောက်ဂူဖြည့်, ဥစ္စာတွေနဲ့နှင့်သူ၏တွင်း.
2:13 အကယ်, ငါသည်သင်တို့ဆီသို့လာဦးမည်, ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏, ငါတောင်မှမီးခိုးမှသင်၏ရထားမီးရှို့မည်, နှင့်ဓားကိုသင့်ရဲ့ခြင်္သေ့ပျိုတို့ကိုလောင်စေမည်. ထိုအခါငါပြည်မှသင့်ရဲ့လုယူရာဥစ္စာကျြဆီးပါလိမ့်မယ်, နှင့်သင့်သံတမန်တို့စကားသံကိုနောက်တဖန်မမြည်ရ.
3:1 အသွေးမြို့မင်္ဂလာရှိ၏, မုသာစကားနှင့်အကြမ်းဖက်မှုအားလုံးထုံးစံနှင့်ပြည့်စုံ. ရာဇဝတ်မှုသင်မှမလွှဲရကြလိမ့်မည်:
3:2 ထိုနှင်တံ၏စကားသံကို, နှင့်လှည့်ရထားဘီး၏စကားသံကို, နှင့် neighing မြင်း၏, နှင့်မီးလောင်ရာရထားကို, နှင့်စီးသူကိုမြင်းစီးသူရဲ,
3:3 နှင့်လျှပ်တစ်ပြက်ဓားနဲ့ထွန်းလင်းလှံ, နှင့်ကွပ်မျက်ခံရတဲ့လူအစုအဝေးနှင့်တစ်ဦးကြမ်းတမ်းသော ruination ၏. အသေကောင်မှအဆုံးသတ်မရှိ, သူတို့အသေကောင်အပေါ်မှာကျဆုံးကြလိမ့်မည်.
3:4 အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ထားရှိမည်အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏မတရားသောမေထုန်၏အလုံးအရင်း၏, လှပနှစ်သက်နှင့်မကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်သုံး, သူမ၏မတရားသောမေထုန်အားဖြင့်လူအမျိုးမျိုးရောင်းသော, နှင့်သူမ၏မကောင်းသောအနေဖြင့်မိသားစုများကိုလုပ်နေ:
3:5 ကှ္ဂျကှ္ဂျ, ငါသည်သင်တို့ဆီသို့လာဦးမည်, ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏, ငါသည်လည်းသင်တို့၏မကျြနှာကိုရန်သင့်အရှက်ကွဲခြင်းကိုထုတ်ဖေါ်လိမ့်မယ်, ငါတပါးအမျိုးသားတို့သည်ရန်သင့်အချည်းစည်းရှိခြင်းကိုပြသပါလိမ့်မယ်, နှင့်နိုင်ငံတို့ရန်သင့်အရှက်ကွဲ.
3:6 ထိုအခါငါသည်သင်တို့ကိုကျော်စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောချမည်, ငါအလွဲသုံးမှုနှင့်အတူသင်တို့ကိုညှဉ်းဆဲလိမ့်မည်, သင်တို့ကိုငါ၏ဥပမာတစ်ခုဖြစ်စေမည်.
3:7 နှင့်ဤဖြစ်ရကြလိမ့်မည်: သငျသညျမြင်တော်မူသောလူတိုင်း, သငျသညျမှ recoil လိမ့်မည်, သူကပြောပါလိမ့်မယ်: "နိနေဝေမြို့ပျက်စီးခဲ့သည်။ " သင်ကျော်ကသူ့ဦးခေါင်းကိုလှုပ်ရှားမည်ကိုအဘယ်သူ? အဘယ်မှာရှိငါသည်သင်တို့အဘို့သက်သာအရပ်ကိုရှာစေခြင်းငှါ,?
3:8 သင်လူဦးရေအာလေဇန္ထက်ပိုကောင်းတဲ့ Are, မြစ်တလျှောက်တွင်ကျိန်းဝပ်ရာ? ရေကိုကဝိုငျး: ပင်လယ်, ယင်း၏စည်းစိမ်ဥစ္စာနှင့်အတူ. ရေသည်မြို့ရိုးများမှာ.
3:9 ကုရှပြည်နှင့်အဲဂုတ္တုပြည်ကိုသူ့ရဲ့အစွမ်းသတ္တိကိုခဲ့ကြသည်, နှင့်မျှမန့်သတ်ချက်ရှိပါတယ်. အာဖရိကနှင့်မြောက်ပိုင်းအာဖရိကသင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ဆောင်ဖက်ပါပြီ.
3:10 သို့သော်ငြားလည်း, သူမသိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသောသို့ transmigration နှင့်အတူဝေးကိုဦးဆောင်ခဲ့ပြီး. သူမ၏သူငယ်များခပ်သိမ်းသောလမ်း၏ထိပ်မှာတို့၌ချိုးဖဲ့လျက်ပြီ, သူတို့သူမ၏နာမည်ကြီးတွေကျော်စာရေးတံချကြ, လူအပေါင်းတို့သည်သူမ၏အထက်တန်းလွှာခြေချင်းအတွက်အတူတကွဆွဲထားကြ၏ပြီ.
3:11 ထို့ကြောင့်, သငျသညျမြားကိုလညျး inebriated ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်, သငျတို့သမထီမဲ့မွငျပွုပါလိမ့်မည်, သင်အတိုက်အခံထံမှအကူအညီကိုရှာပါလိမ့်မယ်.
3:12 သင်၏ရဲတိုက်ရှိသမျှကိုသူတို့အစိမ်းရောင်သင်္ဘောသဖန်းသီးနှင့်အတူသင်္ဘောသဖန်းပင်ကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်. သူတို့အကြမ်းဖက်လှုပ်နေတယ်ဆိုရင်, သူတို့မျိုသူတဦးတည်း၏နှုတ်တော်ထွက်သို့ရောကျပါလိမ့်မယ်.
3:13 အကယ်, အမြိုးသမီးမြားသင်၏လူများ၏ဗဟိုမှာ. သင်၏ပြည်၌မြို့တံခါးသင်၏ရန်သူတို့ကိုကျယ်ပြန့်ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မည်; မီးသင့်ရဲ့ဘားတို့ကိုလောင်စေမည်.
3:14 အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ပိတ်ဆို့ထားခြင်း၏ရေထဲမှာဆွဲပါ; သင်၏ရဲတိုက်တည်ဆောက်. ရွှံ့နှင့်နင်းသို့ သွား.; အုတ်လုပ်သူကအလုပ်မလုပ်.
3:15 အဲဒီမှာ, မီးသငျသညျတို့ကိုလောင်စေမည်. သင်တို့သည်ထားဖြင့်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ရကြလိမ့်မည်; ကပိုးကဲ့သို့သင်တို့တို့ကိုလောင်စေမည်. အဆိုပါပိုးများကဲ့သို့အတူစုဝေး. ကျိုင်းကောင်များကဲ့သို့များပြား.
3:16 သင်တို့သည်မိုဃ်းကောင်းကင်ထဲမှာကြယ်ပွရှိပါတယ်ထက်ပိုပြီးစေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုရာ၌ခန့်ထားပြီ. အဆိုပါပိုးဖြန့်နှင့်ဝေးပျံသန်းလျက်ရှိသည်.
3:17 သင့်ရဲ့အုပ်ထိန်းကျိုင်းကောင်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏, နှင့်သင့်သူငယ်များကျိုင်းကောင်အကြားကျိုင်းကောင်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏, အအေးမိနေ့၌ခွံအပေါ်ထားတဲ့ဆင်း. နေရောင်သည်ထ, သူတို့ပျောက်ပျံသန်း, သူတို့ခဲ့ရာအရပ်ကိုသိရန်လမ်းမရှိခဲ့.
3:18 သင့်ရဲ့အချင်းသိုးထိန်းငိုဖြစ်လာကြပါပြီ, ရှငျဘုရငျကိုအာမခံချက်. သင်၏မင်းတို့သည်သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံကြလိမ့်မည်. သင်၏လူကိုတောင်ပေါ်က hidden ကျန်ရစ်ခဲ့ကြ, သူတို့ကိုစုရုံးတယောက်မျှမရှိ.
3:19 သင့်ရဲ့အဗဒ္ဒုန်ဝှက်ထားသည်မဟုတ်; သင့်ရဲ့ဒဏ်ရာကြမ်းတမ်းသောဖြစ်ပါသည်. သင့်ရဲ့ကျော်ကြားမှု၏စကားကိုသင်တို့ကြားရပြီသောသူအပေါင်းတို့သည်သင်တို့အပေါ်မှာမိမိတို့လက်ကိုဆုပ်ကြပါပြီ, အဘယ်သူကိုကျော်ကိုယ်ပြုသောအဓမ္မအမှုကိုအစဉ်မပြတ်နင်းမမူသောကြောင့်,?
ဇူလိုင်လ 22, 2019
ဇူလိုင်လ 21, 2019
ဇူလိုင်လ 20, 2019
ဇူလိုင်လ 19, 2019